09/03/2018 - Page 3 sur 4 -
Ambatofotsy : Nidoboka am-ponja ilay mpamily nidaroka zandary
Fiara fitateram-bahoaka tsy nanara-dalàna iray indray no fantatra fa nampisavorovoro, ary niafara hatramin’ny fifampikasihan-tanana tamin’ny mpitandro filaminana nandamina izany, teny Ambatofotsy. Ny alahady maraina lasa teo no nitrangan’izany. Araka ny loharanom-baovao dia voalaza fa tsy …Tohiny
Ady amin’ny harom-paosy : Olona miisa 12 voasambotra teny Isotry
Mitohy hatrany ny hetsika hatao hiadiana amin’ny resaka harom-paosy sy ny sinto-mahery eny Isotry sy ny manodidina. Vokatr’izany, dia lehilahy miisa roa ambin’ny folo indray no voasambotry ny polisy teny amin’ny tetezan’i Bekiraro ny alarobia …Tohiny
Lozam-piarakodia teny Andranomena : Olona 4 nalaina am-bavany
Nalaina am-bavany teny anivon’ny fampanovana omaly avokoa ny olona miisa efatra tafiditra an-daharana tamin’ny trangana lozam-pifamoivoizana niseho teny Andranomena. Isan’izany ny mpamily ny fiara nitera-doza tompon’antoka voalohany tamin’ny tranga, ary ireo olona nanatri-maso ny fisehoan’ny …Tohiny
Lalaovin’i Marc Ravalomanana sy ny ekipany araka izay azo atao mihitsy ny fanakatonana ny orinasa Tiko sy AAA ary ny fanapahana ny famatsiana herinaratra ao amin’ireto orinasa ireto. Ny fanjakana indray mantsy no voampanga ho …Tohiny